Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 66
Hogaamiyihii hore ee CUBA Oo geeriyooday.
Sida uu baahiyay tvga dalka Cuba waxaa geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Cuba ninka lagu magacaabo Fidel Castro oo sanado xiriir ah maamuli jiray dalkaas, islamarkaana ahaa madaxweyne Ku ad adag dowladaha reer galbeedka. Fidel Castro oo ku geeriyooday da’da 90 ayaa tobankii sano ee lasoo dhaafay wuxuu ahaa bukaan jiif ay soo riteen xanuuno kal duwan, isagoona lagu dabiibayay ...	Read More »
Gaari dagaal iyo raggii saarnaa oo Towbad keen ah oo isku dhiibay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
War goordhow kusoo dhacay warqabadka Idaacadda Al-Furqaan ayaa tibaaxaya in Askar katirsan dowladda Federaalka oo aad u hubeysan ay isku soo dhiibeen maamulka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Labo Askari oo wata Gaari nooca Cabdi bile ah islamarkaan ku rakibanyahay qori Dhashiike ah kuwaas oo kasoo tagay magaalada Baraawe ayaa isku dhiibay maamulka Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha hoose. Waxay sidoo kale ...	Read More »
Dhulka Yahuuddu xooga uga haysato Muslimiinta Filastiin ayaa waxaa laga soo sheegayaa iney ka kaceen dab xoog badan oo si dhaqsi leh ugu fidayo magaalooyin iyo goobo hor leh. Dabkan oo ah mid aad u ballaaran ayaa ka kacay 13 goobood oo ay ku jirto magaalada Al-Qudus, Macluuf, Al-Jaliil iyo kuwa kale, waxaana ay ku socdaan si xowli ah iyagoona ...	Read More »
Sarkaal sare oo Iiraani ah oo lagu dilay dalka Suuriya.
Wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in sarkaal sare oo katirsan dowladda Iiraan lagu dilay dagaallada ka socoda dalka Suuriya. Sarkaalka dhintay oo lagu magacaabo Muxamed Muzaaric kana mid ah saraakiisha kacaanka Iiraan ee ku sugan dalka Suuriya ayaa warbaahinta Iiraan waxay sheegeen in dhaawac uu kasoo gaaray dagaallada ka socoda dalkaas ee lagula jira Jamaacaadka Jihaadiga iyo kuwa ...	Read More »
Akhriso:Al-Qaacida oo war kasoo saartay hogaamiye sare oo uga shahiiday dalka Afqaanistaan.
Hogaanka ugu sareeya Mujaahidiinta Alqaacida ayaa bayaan Taczi ah kasoo saaray istish-haadka hogaamiye sare oo katirsan Alqaacida oo dhawaan ku shahiiday dalka Afqaanistaan kadib markii ay beegsatay diyaarad drones ah oo ay leedahay dowladda Maraykanka. Bayaanka oo ku qornaa luuqadda Carabiga islamarkaana ay baahisay mu’assasada As-Saxaab oo ah garabka warbaahinta u qaabilsan Al-Qaacida ayaa lagu xaqiijiyay istish-haadka hogaamiye Faaruuq Al-Qaxdhaani ...	Read More »
Iiraan oo qirtay in kun Askari looga dilay Suuriya.
Dowladda Iiraan oo kumanaan Askari ay ka joogaan dalka Suuriya, kuwaas oo ka barbar dagaalama malleeshiyaadka Shabiixada Bashaar Al-Asad ayaa boqolaal Askar iyo Saraakiil sar sare ku waysay dagaalka ka socoda dalkaas. Mas’uul sare oo Iiraani ah islamarkaana madax ka ah hay’ad daryeesha qoysaska Malleeshiyaadka Shiicada ah ee ku dhinta dagaallada Suuriya oo lagu magacaabo Muxamed Cali Shahiidi oo waraysi ...	Read More »
Iyadoo weli diyaaradaha Maraykanka iyo ciiidamada Rawaafida ay wax guulo ah ka gaari la’yihiin dagaalka ba’an ee ka socoda magaalada Muusil una dhexeeya Muslimiina Ahlu Sunnaha ah iyo Shiicada oo taageero ka helaya kuwa Reer galbeedka ayaa hadana dowladda Maraykanka waxay ku kaceysaa falal argagax badan oo ay ku dooneyso in Muslimiinta ay ka dhigto kuwa gacan maran. Dagaalka Muusil ...	Read More »
Xukuumadda Urdun oo Xukun dil ah ku riday Nin laayay Ciidamo katirsan Sirdoonka maamulkaas.
Maxamuud Xasan Mushaarafa oo bishii Ramadaan ee aynu soo dhaafnay weerar khasaare baan dhaliyay ku qaaday xafiis ay ku sugnaayeen ciidamo iyo saraakiil katirsan maamulka ka dhisan dalka Urdun ayaa lagu riday xukun dil toogasho ah. War kasoo baxay maxkamadda qaabilsan arimaha Amaanka ayaa lagu sheegay in Maxamed lagu riday xukun toogasho ah, maadaama uu dilay Saraakiil iyo Askar katirsan ...	Read More »
Diyaaradaha Aala-Sucuud oo duqeeyay Magaalada Sancaa.
Wararka ka imaanaya magaalada Sancaa ee caasimadda dalka Yaman gacantana ugu jirta malleeshiyaadka Xuuthiyiinta ah ayaa ku waramaya in diyaaradaha Nidaamka Aala-Sucuud ay duqeeyeen fariisimo milliteri oo ay leeyihiin Xuuthiyiinta. Duqeymaha oo ahaa kuwa xoogan islamarkaana is xig xigay si weyna looga maqlay magaalada Sancaa ayaa waxaa lagu garaacay saldhig ciidan oo ay ku suganyihiin malleeshiyaadka Xuuthiyinta kaas oo ku ...	Read More »
Duqaymo Cadowtooyo oo culus ayaa ku soconaya magaalada Xalab.
Dowladda Ruushka oo taageereysa maamulka Mujrimka ee Bashaar Al-Asad ayaa duqeymo u muuqda dabargoyn waxay kawadaa maalmihii aynu soo dhaafnay magaalada Ahlu Sunnaha leeyihiin ee Xalab, halkaas oo sanado xiriir ay xaafado kamid ah ay ku jirto go’doon adag. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxay dowladda Ruushka billowday duqeymo noocyo kala duwan leh, sida duqeymaha ay geystaan diyaaradaha, madaafiic dheereysa ...	Read More »
Page 66 of 94« First...405060«6465666768	»	708090...Last »